Parthenolide Cas 20554-84-1 Qiimaha, Alaab-qeybiye ka socda Bolise
[Isha Botanical] Magnolia liliflora Desr
[Foomka Molecular] C15H20O3
[Miisaanka Molecular] 248.32
[Nadaafad] 95% ~ 99%
[Barta dhalaalida] 113 ilaa 115 ° C (235 ilaa 239 ° F; 386 ilaa 388 K)
1. Buro ka hortag ah
2. Fayraska fayraska
3. Caabuq ka hortag ah iyo anti-atherosclerosis
4. Daaweynta xanuunka dhanjafka, qandhada iyo xanuunka loo yaqaan 'rheumatoid arthritis'
Ku saabsan Parthenolide
Parthenolide waa wax soo saar dabiici ah oo ka mid ah sesquiterpene lactone, kaas oo ka go'doonsan dhirta daawada sida Chrysanthemum morifolium iyo tourmaline. Dhirtaas waxaa si weyn loogu isticmaalaa qandho, anthelmintic iyo anti-bararka. Sanadihii la soo dhaafay, daraasaduhu waxay xaqiijiyeen in daawada loo yaqaan 'parthenolide' ay leedahay nashaadaadyo fara badan oo muhiim u ah dawooyinka, sida anti-buro, anti-virus, anti-bararka iyo anti atherosclerosis, iwm. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa la ogaaday in Stevia ay ka hortagto doorka kansarka ee burooyin kaladuwan, sida kansarka naasaha, cholangiocarcinoma, kansarka ganaca, kansarka kaadiheysta, kansarka qanjirka 'prostate', leukemia, melanoma iyo neerfaha.
Parthenolide waa antisecretory, anti-bararka, spasmolytic waxayna xakameysaa sii deynta 5-HT ee dhiig-xinjiraha. Sidoo kale wuxuu joojiyaa jiilka leukotriene B4 iyo thromboxane B2.